Madaxweyne Xasan oo u ambabaxay dalka Denmark – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Madaxweyne Xasan oo u ambabaxay dalka Denmark * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo u ambabaxay dalka Denmark
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka duulay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, isagoo ku sii jeeda magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Madaxweynaha oo ay safarkiisa ku wehliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirrada ayaa lagu wadaa in uu ka qeybgalo shirka ka firmidoona dalka Denmark 19-ka bishan, kaasoo looga hadlayo arrimo ku saabsan horumarka dalka.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay dowlada Denimark ayaa waxaa shir gudoomin doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo shirka ay ka qeybgalayaan wadamada deeq bixiyaasha ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ilaa 7 Wasiir oo ay ka mid yihiin Wasiirka Arrimaha Dibada, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Wasiiro kale ayaa diyaarad ka qaaday garoonka diyaaradaha Aadan cadde, iyadoo wafdigan ay qeyb galayaan shirka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee ka dhacaya magaalada Copenhagen.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shirkaan tegaya iyadoo isaga iyo R/wasaare Cabdiweli ay si weyn isu khilaafeen.